Daraasad Si Weyn Uga Digtay Khatarta Daawada Trump U isticmaalay Coronavirus Ee lHorseeday Dhimashada - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
London(ANN)-Daraasad ayaa si weyn uga digtay in daawada uu Madaxweyne Trump ku sheegay in lagu daweyn karo cuddurka safmarka ah ee Covid-19 ay khatar dhimasho aad u badan u horseedi karto bukaannada qaba cuddurka Coronavirus ee uu soo ritay.
Daraasaddu waxay sheegtay iney dawadan looga hortago Malaariyada ee hydroxychloroquine-ka ay waxtar u lahayn in lagu daweeyo bukaannada.
Madaxweyne Trump wuxuu sheegay inuu dawadaasi isticmaalay xilli ay khubarada caafimaadka sheegeen dawadaasi isticmaalkeeda inan loo hayn caddeyn muujinayso in lagu daweyn karo cudurka safmarka ah ee Karona.
Madaxweyne Trump ayaa marar badan dawadaasi soo bandhigay in la isticmaalo, si ka hor imaneyso talooyinka khubarada caafimaadka ay soo jeediyaan.
Dawada Hydroxychloroquine- ka waxay u wanaagsan tahay la dagaallanka Malaariyada iyo xanuunada ku dhaca isgooysyada jirka. Balse weli ma jirto tijaaba caafimaad oo dawadaasi lagu sameeyey oo ku talineyso in dawada hydroxychloroquine- ka loo isticmaalo daweynta ama la dagaallanka faayrsaka Karona.
Bukaannada cudurka lagu tijaabiyey ayaa waxa la siiyey 18%hydroxychloroquine- ka , 16.4% chloroquine- ka, 9% kooxda xakameynta cudurkana. Bukaannada lagu tijaabiyey dawooyinka hydroxychloroquine ama chloroquine oo weliba loo raaciyey dawada atibiotic waxay khatar aad u weyn u galeen dhimasho.
Balse Barafasoor Stephen Evans oo ka tirsan qaybta caafimaadka ee London School, wuxuu sheegay: “Waxaa tijaabada lagu sheegi karaa xoogahaa rajo ah oo tijaabada lagu ogaaday iney jirto oo xoogaha faa’ida ah laga heli doono balse ay dawadaasi ay horseedeyso wadna xanuun iyo dhibaatooyin la mid ah inta aan ogaannay.”
Mr Trump wuxuu sheegay in cudurka Covid-19 laga baaray oo laga waayey, maadaamaa uu qaatay dawadaasi uuna u maleynayo dawadaasi “waxtar wanaagsan ay ii lahayd”.
Tijaabooyin qoto dheer oo lagu sameynayo dawada Malaariyada in lagu daweyn karo Covid-19 ayaa socda. Xirfadlayaal caafimaad oo ka badan 40,000 oo ka soo jeeda Yurub, Afrika, Asia iyo Koonfurta Mareykanka oo bukaannada ay daweynayeen cudurka ka qaaday ayaa sida oo kale la sheegay in lagu tijaabiyey dawadan.
Mar daraasadda ay Lancet sameysay wax laga weydiiyey Dr Deborah Birx oo ah iskuduwaha guddiga ka hortagga karona ee aqalka cad ayaa sheegay hay’adda maamusho cunnada iyo dawooyinka ee dalka Mareykanka “ay si cad u qeexi doonta” in dawadan loo isticmaali karo ka hortagga coronavirus ama lagu daweyn karo.
Dr Marcos Espinal, oo ah madaxa hay’adda dawooyinka Mareykanka ee Pan America oo ka mid ah Hay’adda Caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa carrabka ku adkeeyey ilaa iyo hadda iney jirin tijaabada la isku halleyn karo oo caddeyneyso in dawada hydrochloroquine- ka loo isticmaali karo coronovirus.
Trumo dawada isticmaalkeeda muxuu ku sheegay?
“Waxaan qaadanayay muddo hal toddobaad iyo bar ah hadda waan joogaa, wali halkaan ayaan joogaa,” ayuu yidhi.
Mar la waydiiyay madaxweyne Trump, faa’iidada dawadaan ayuu ku jawaabay: ” waan tan caddeynteeda oo ah waxaan ka helay waxtar badan ayey leedahay.”
Waxay soo xigateen warbixinno sheegaya in dawadu ay ku sababi karto bukaanada cudurka karona dhibaatooyin dhanka wadnaha ah oo aad u daran
READL Britain bulk buys hydroxychloroquine as potential Covid-19 treatment Coronavirus outbreak
READ: Madagascar launches Africas first cure for Coronavirus